अभिनेताको सोख : अमिताभका कति कार ? – Etajakhabar
अभिनेताको सोख : अमिताभका कति कार ?
७५ वर्षीय अभिनेता अमिताभ बच्चनको उपस्थिति बलिउडमा अझै पनि सक्रिय छ । अभिनयमा खप्पिस अमिताभको एउटा प्रमुख सोख हो, कार संकलन । विभिन्न ब्रान्डका कार संकलन गरेर राख्ने उनको सोख छ । उनीसँग लेक्सस, रोल्स रोयल फेन्टम, बिएमडब्ल्यू, मर्सडिजलगायत कार छन् । उनी २ अंकलाई आफ्नो लक्की नम्बर मान्छन् । उनका सबै कारको नम्बरमा २ अंक समावेश छ ।
अमिताभलाई कार उपहारस्वरूप पनि आएको छ । ‘एकलव्य’मा राम्रो अभिनय गरेका कारण फिल्म निर्माता विधुविनोद चोपडाले उनलाई सेतो रङको रोल्स रोयल फेन्टम गाडी उपहार दिएका थिए । अमिताभसँग भएकामध्ये यो नै सबैभन्दा महँगो कार हो । यसको मूल्य भारतीय बजारमा नेपाली सात करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ ।
उनीसँग बेन्टले आरनेज आर र मर्सिडिज बेन्ज जिएलएसयुबी कार पनि छन् । यी कारको मूल्य क्रमशः चार करोड ८० लाख र चार करोड ३० लाख रुपैयाँ पर्छ ।
अमिताभको अर्को कार टोयोटा ल्यान्ड क्रुजरको मूल्य झन्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ पर्छ । एक करोड ७० लाख रुपैयाँ मूल्यको बिएमडब्ल्यू ७ सिरिज ७६० एलआई कार पनि उनले संकलन गरेका छन् । उनीसँग भएका लेक्सस र पोर्से केयमन एस कारको मूल्य पनि दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । लेक्ससको मूल्य दुई करोड रुपैयाँ पर्छ भने पोर्से केयमन एसको एक करोड ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट एक करोडभन्दा कम मूल्यका कार भने अमिताभसँग दुईवटा छन् । मिनी कपर एस र रेन्ज रोभरको मूल्य भारतमा नेपाली रुपैयाँ ७० लाखको हाराहारीमा पर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन २२, २०७४ समय: १०:३८:३५